MAQAARKA CAAGA AH EE SU'AASHA: SHARAXAADDA, FAA'IIDOOYINKA, KHASAAROOYINKA, SHURUUDAHA XULASHADA, RAKIBIDDA - INFRASTRUCTURE
Ku kaydi badeeco bac ah
Dadka degaanka xagaaga, kuwaas oo doonaya in ay beeraan khudaarta mustaqbalka oo ay sameeyaan ilaalin, had iyo jeer waxay la kulmaan dhibaatada haysashada kaydinta muddada fog. Iyadoo aan lahayn maqaasi halkan kuma filna. Si kastaba ha noqotee, qof walbaa ma haysto wakhti iyo karti u leh in uu iskood u dhiso, oo aad u baahan tahay inaad ku takhasusto caawinta takhasusle. Dhawaan, diyaar garowga-diyaarinta ee caagaga xagaaga ayaa si caan ah u caan ah. Waxay ku haboon yihiin, si sahlan oo loo ilaaliyo loona ilaaliyo dhibaatooyin badan, sida caaryo, fungi, jeermisyo waxyeelo leh, jiirka iyo cayayaanka, tusaale ahaan. Qiimee faa'iidooyinka iyo qasaarada miisaska noocan ah, baro sida loo doorto iyo sida loo dhigo, waxaad akhrin kartaa alaabtayada.
Maqaasi kasta waxaa loogu talo galay in lagu kaydiyo cuntada. Waa in la ilaaliyaa shuruudo gaar ah oo kordhiya tayada haynta beeraha:
la'aanta iftiinka qoraxda;
heer kulul oo joogto ah;
Ma taqaanaa? Waxaa jira dhowr khibradood oo ku saabsan sida si guul leh loogu kaydiyo khudaarta kala duwan ee maqaasiinka. Tusaale ahaan, xididdo iyo radishes waa in lagu dhajiyaa wadahadal dhoobo ah, dabacasaha waa in lagu kaydiyaa ciidda, iyo baradho waa in lagu keydiyaa sabiibta qalalan..
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan iyo faa'iido darrada ah ee maqaasiinka caagga ah
Ka hor intaanad iibsanin maqaasiin caag ah, waxaad u baahan tahay inaad miisaamiso faa'iidada iyo khasaaraha, iyo sidoo kale akhrinta dib u eegista dadka horay u isticmaala taangiga noocaas ah, qiyaas qiimaha rakibaadda iyo dayactirka.
Wax ka barto kaydinta ku haboon ee khudaarta.
Qalabka dhuxusha ee loogu talagalay dacha waa sanduuq leh dhumucda derbiga, daboolka hawada, roogagga iyo jaranjarada. Inta badan waxaa laga helaa foomka kowadaha leh cabbirka 1.5 × 1,5 × 1.5 m ama 2 × 2 × 2 m Mass - qiyaastii 700-800 kg (ku xiran naqshadeynta iyo soo saaraha). Si kastaba ha ahaatee, maanta waxay doorteen waa weyn, oo waxay jecel yihiin cabirka iyo qaabka la tixgelin karo macaamiisha kasta. Waxaa jira wareega wareegga, ovalaha, naqshadaha, naqshadaha.
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka caagagga caagagga ah waa kuwan soo socda:
suurtagalnimada in la rakibo meel kasta - ka yar guriga, garaashka, kiisaska iyo dhismayaasha;
si deg deg ah loo rakibay loona rakibay;
uma baahna shaqo dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha, tan iyo dhammaan raxanada, jaranjarrooyinka horay loo soo gelin doonaa;
iyadoo la rakibo habboon, heerkulka iyo qoyaanka waxay ku sii jiri doonaan sanduuqa, waa inaysan jirin boodbood;
Maqaar diyaarka ah oo ku haboon goobaha leh dhulka sare iyo carrada;
rakibidda saxda ah waxay bixisaa hawo tayo sare leh;
wuxuu ka difaacayaa jeermiska iyo jiirka;
ma nuugaan urta oo ma dhaafaan qoyaan;
Xasaasiyadda waxaa laga sameeyaa caag-cunto heer-kulul, shelefyada iyo dabaqa ayaa ka samaysan alwaax (waxaa kaloo lagu samayn karaa caag);
fududahay nadiifinta iyo jeermiska;
nolosha shaqada - 50 sano;
Daryeelka fudud - mar ama laba jeer sannadkii si aad u dhaqdid derbiyada iyo dabaqa leh saabuunta.
Ilaa inta laga gaarayo awoodda uu ka walwalsan yahay, tusaale ahaan, naqshadaynta heerka Tingard celinta waxay ku yaallaa ilaa 180 dhalooyinka seddex litir ah oo ku yaala shelefyada iyo 12 jawab oo khudaar ah oo dhulka yaala.
Soo bandhig maqaarka balaastigga iyo dhowr dhibcood:
Qiimaha sarreeya - kharashka sicir-dhimista qiyaastii 30-50% wax ka badan qalabka dhismaha caadiga ah, iyo kharashka rakibidda ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Guud ahaan, kharashka taangiga la dhammeeyey wuxuu noqon doonaa laba illaa seddex jeer ka sarreeya tan lebiska caadiga ah ama qashinka la taaban karo;
kuwa ugu badan waa taangiyada dhoobada, taas oo aan had iyo jeer ku habbooneyn xagaaga degganaha;
kakanaanta hawlaha rakibidda;
kakanaanta rakibida goobta goobta dhismayaasha diyaarka ah - mar kasta ma suura gal ah in lagu wado qalabka lagu qodo ceelka;
Nidaamka hawada ee caadiga ah. Haddii aad qorsheyneyso inaad ku keydiso qadar badan oo khudaar ah, waxaad u baahan doontaa inaad dib u qalabsato, tani waxay horay u jebinaysaa xaddiga qoor-gooyaha;
Rakibaadda qalafsan waxay keeni kartaa xaqiiqda ah in xilliga guga ee weel caag ah lagu tirtiri doono dhulka dhulka.
Sida loo doorto naqshad
Waxaa jira laba nooc oo kala ah:
Wax ka sameeyey caag.
Waxaa laga sameeyay muraayada fibergoorka.
Waxay sidoo kale noqon karaan kuwo horay looqaaday oo adag. Sidaa darteed, marka aad dooranaysid naqshad, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa astaamahan. Xulashada labaad ayaa la doorbidaa sababtoo ah weelasha aan caadiga ahayn waxay leeyihiin dareen adag.
Ma taqaanaa? Baradhadu waxay u baahan yihiin in lagu kaydiyo oo kaliya Maqsin. Qaboojiyaha loogu talagalay ujeeddadan ma aha mid ku haboon, sababtoo ah kiiskan, istaarijka ku jira khudradda waxay u rogi doontaa sonkorta, baradkuna wuxuu noqonayaa mid macaan u leh dhadhanka.
Si aad u xulato naqshadda saxda ah oo aad u rakibtid, isticmaal talooyinkayaga.
Ka-joojinta waa in laga sameeyaa tayo sare iyo qalabka deegaanka, iyada oo la iibsanayo waa inaad hubisaa helitaanka dukumentiyada, shahaadooyinka, waajibaadka damaanad qaadka, GOSTs, iwm.
Ku rakibida, iyo sidoo kale xulashada meel loo rakibo, waa in lagu dhajiyaa khabiiro takhasus leh oo, ka dib markii la baaray goobta, waxay soo jeediyaan meesha ugu haboon ee lagu dhigayo xayiraadda, waxay qiyaastaa heerka biyaha dhulka si ay u habboonaato xoojinta, soo jeedinta qaabka ugu haboon. Waxay ka fiicnaan lahayd haddii shirkad ay ku howlan tahay iibinta Maqsinka iyo rakibidda. Sidaa darteed, markaad dooranayso fuliyeeye, hubso inaad weydiiso haddii uu bixinayo adeegyo rakibo iyo rakibo.
Haddii aad ku haboon tahay size, markaa waxaad iibsan kartaa kaydka caaga ah ee caag ah oo la diyaariyay. Haddii la rabo, qaabkeeda iyo qadarkeeda waa la dalban karaa, laakiin tani waxay si weyn u kordhinaysaa qiimaha taangiga.
Ku rakibidda maqaasiinka caaga ah
Ku rakibidda kaydinta caagga ah waxay ka kooban tahay afar talaabo oo waaweyn:
Qodashada godadka cabbirka loo baahan yahay.
Ku rakibida dillaac adag (la xoojiyay oo la xoojiyey) ama hoos u dhufashada hoose ee la taaban karo.
Kala saar weelka shooladda, qalabyada qalabka gaarka ah.
Qulqulka ciidda leh ciid iyo cement.
Sidee hawshani u eegaysaa xaqiiqda waxaa laga heli karaa fiidiyowyadaas.
Doorashada meel loogu talagalay "cube"
Waa shardi in la doorto meel ka hooseysa "cube" waa baaritaanka carrada iyo helitaanka isgaarsiinta. Tani waa lagama maarmaan labadaba si loo doorto meesha ugu fiican, iyo si loo rakibo si loo ogaado qalabka ay u baahan yihiin si loo rakibo. Waxaa lagugula talinayaa inaad si faahfaahsan uga barato qorshaha goobta.
Baro sharciyada kaydinta hargaha, qajaarka, yaanyada, iyo basasha.
Mabda 'ahaan, milkiilaha guriga ayaa dooran kara meel kasta oo loogu talagalay miisaanka, laakiin waxaa wanaagsan in la siiyo goobaha heerkulka ugu hooseeya ee biyaha lagu arkay. Haddii kale, si aad u badbaado, waxaad ku dari kartaa nidaam dheellitiran oo biyo ku daadin doona.
Waa muhiim! Soo-saarayaasha maaddooyinka caaga ah ee boodhka ee farsamooyinkooda farsamo waxay qorayaan in joogitaanka biyaha dhulka hoostiisa aaney dhibaato ku ahayn rakibidda gabadha. Si kastaba ha noqotee, way fiican tahay in la helo ammaan iyo helitaanka meel ku habboon oo hirgalisa tayo sare leh "anchoring", tan iyo daciifinta daciifinta waxay horseedi kartaa xaqiiqda ah in biyaha uu soo celinayo maqaasiinka. Xaaladdan, waa in dib loo dhejiyaa, taas oo keeneysa kharash dheeraad ah..
Ceelku waa in lagu qodaa 0.5 m ballaaran oo ka dheer intii weelka. Haddii aysan suurtagal ahayn inuu soo galo banaanbaxa, markaa waxaad u baahan doontaa inaad si aad ah u qodo. Sida caadiga ah, Maqsin waxaa lagu rakibay on a la xoojiyay la taaban karo horay loo dhigay godka. Masruufka waa in uu ahaado mid heer sare ah, si loo saxo waxaad u baahan doontaa inaad cabirto heerka. Haddii aanay suurtagal ahayn in la dhigo boodhka, markaas fiilooyinka birta ah ayaa lagu dhejiyaa hoosta, taas oo markaa lagu xoojin karo 20-mitir mitir ah.
Weelku wuxuu ku xiran yahay weelka oo leh maro gaar ah. Tusaale ahaan, waxaad ku dhejin kartaa fiilooyinka birta ah ee hoose ee godka, ka dibna ku dheji daboolka, kuna hubi maqnaashaha labada dhinacba. Sidaa daraadeed naqshaduhu waxay noqon doonaan kuwo waara
Waa muhiim! Haddii aad haysatid qalab iyo kalkaaliyeyaal dhowr ah (shan illaa lix qof), waxaad ku rakibi kartaa weelka adiga oo aan shaqaalaysiin shaqaale hal maalin ah. Haddii qashin lagu sameeyo qodobbada iyo boodhka hoose ee loo baahan yahay, nidaamku wuxuu qaadan karaa bil iyo badh.
Ka dib markaad xayiraad ku riddo godadka, meelaha udhexeeya derbiyadeeda iyo derbiyada godadka waxaa ka buuxsamaa isku-darsiga cement-sand. Marka xigta, sii wad dhirta gudaha. Waxaa si fudud loo samayn karaa iyada oo la isticmaalayo tilmaamaha soo-saaraha. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo iftiinka, dabaysha, jaranjarada, rackets, sanduuqyada miraha iyo khudaarta.
Ma taqaanaa? Khudaarta iyo miraha waa in si gooni ah loo kaydiyaa, weelal kala duwan. Si kastaba ha noqotee, haddii aysan suurtagal ahayn, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado, tusaale ahaan, waa mamnuuc in la badbaadiyo qaar ka mid ah. Tusaale ahaan, baradhada iyo tufaaxa waa in lagu dhajiyaa illaa inta ugu macquulsan, tan iyo miro-soo-saaridda gaaska noolaha, oo ka qaybqaata khalkhalka degdegga ah ee khudradda. Baradhadu sidoo kale laguma keydsan karo ee ku xigta basasha, haddii kale basasha ayaa isla markiiba qudhmi doona.
Talooyin iyo xirfado
Ka hor inta aadan iibsanin maqaasiinka diyaarka ah, weydii noocyada deriska ah ee deriskaaga isticmaalaya, dhibaatooyinka ay haystaan, haddii ay jiraan biyo dhulka ku dhow.
Haddii la doonayo, derbiyada Maqsin waxaa lagu sii deyn karaa. Tani waxay noqon kartaa mid madaxbannaan.
U hubso inaad diiriso daboolka Maqsin. Wixii xumbo ku haboon.
Laakiin "hagaajinta" habka hawada ayaa lagula talinayaa. Ficilada aan habooneyn waxay keeni kartaa xaqiiqda ah in qolka khudradda iyo ilaalinta ay ka badan doonaan qoyaanka hawada, taas oo u adeegi doonta ilaha kondensate, caaryada, huurada fungal iyo dhibaatooyin kale.
Ha u jeesanin raqiis. Maqasyo aad u jaban ma dhicin. Soo jeedinnada noocaas ah waa inay noqdaan kuwo walaac leh.
Warshadaha caanka ah
Maanta waxaa jira xulasho ballaaran oo soo saarayaasha mishiinka caagga ah. Si kastaba ha ahaatee, kuwa ugu caansan waa laba:
Triton wuu ka jaban yahay Tingard. Qiimaha ay ku rakiban tahay waxay ka bilaabantaa 80 kun oo roon. Suuqa waa qiyaaso kala duwan: laga bilaabo yaryar - 2 mitir kiiloomitir. m, ilaa weyn - 16 cu. m. Kaydinta kaydka qoyskooda qiyaas ahaan saddex ama afar qof waxay noqon doonaan mugga 3-4 cubic cub. m
Maqaasi waxaa lagu sameeyey iyada oo aan wax seeto, derbiyadeeda waxaa lagu xoojiyay kuwa adag. Xubinta waxaa ka mid ah jaranjaro ka sameysma bir ah, armaajo caag ah, nalalka, habka hawada.
Qiimaha Tinarka shirkadda iyo rakibidiisa waxay ka bilaabantaa 150 kun oo roon. Sidoo kale waa dhismo aan toos ahayn, oo leh qalab adag. Dhinaca derbiga - 15 mm. Qalabka waxaa ka mid ah armaajo alwaax ah, sagxadda dhoobada, jaranjarada biraha, iftiinka iyo hawada. Meelaha caaga ah waa meel aad u fiican oo lagu keydiyo kaydka caadiga ah. Waxay noqon doontaa alaab wanaagsan oo la keydiyo, sababtoo ah ma gudbinayso qoyaan, wuxuu ilaaliyaa heerkulka joogtada ah iyo hawo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, dhammaan xaaladahaas waxaa la ogaan doonaa oo kaliya marka la dooranayo tayada tayada iyo rakibidda xirfadle xirfadeed.